sport – Alanzayar
မလိခင်ရောဘူလာနဲ့ပါတညတည်းထိုးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့De Ridderနဲ့မင်းနှာခေါင်းရိုးချိုးပစ်မယ်ဆိုတဲ့Bigdash အပြည့်အစုံကိုအောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ မလိခင်ရောဘူလာနဲ့ပါတညတည်းထိုးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့De Ridderနဲ့မင်းနှာခေါင်းရိုးချိုးပစ်မယ်ဆိုတဲ့Bigdash အပြည့်အစုံကိုအောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ မလိခင်ရောဘူလာနဲ့ပါတညတည်းထိုးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့De Ridderနဲ့မင်းနှာခေါင်းရိုးချိုးပစ်မယ်ဆိုတဲ့Bigdash အပြည့်အစုံကိုအောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ မလိခင်ရောဘူလာနဲ့ပါတညတည်းထိုးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့De Ridderနဲ့မင်းနှာခေါင်းရိုးချိုးပစ်မယ်ဆိုတဲ့Bigdash အပြည့်အစုံကိုအောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ မလိခင်ရောဘူလာနဲ့ပါတညတည်းထိုးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့De Ridderနဲ့မင်းနှာခေါင်းရိုးချိုးပစ်မယ်ဆိုတဲ့Bigdash အပြည့်အစုံကိုအောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ မလိခင်ရောဘူလာနဲ့ပါတညတည်းထိုးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့De Ridderနဲ့မင်းနှာခေါင်းရိုးချိုးပစ်မယ်ဆိုတဲ့Bigdash အပြည့်အစုံကိုအောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ မလိခင်ရောဘူလာနဲ့ပါတညတည်းထိုးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့De Ridderနဲ့မင်းနှာခေါင်းရိုးချိုးပစ်မယ်ဆိုတဲ့Bigdash အပြည့်အစုံကိုအောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ မလိခင်ရောဘူလာနဲ့ပါတညတည်းထိုးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့De Ridderနဲ့မင်းနှာခေါင်းရိုးချိုးပစ်မယ်ဆိုတဲ့Bigdash အပြည့်အစုံကိုအောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ မလိခင်ရောဘူလာနဲ့ပါတညတည်းထိုးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့De Ridderနဲ့မင်းနှာခေါင်းရိုးချိုးပစ်မယ်ဆိုတဲ့Bigdash အပြည့်အစုံကိုအောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ မလိခင်ရောဘူလာနဲ့ပါတညတည်းထိုးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့De Ridderနဲ့မင်းနှာခေါင်းရိုးချိုးပစ်မယ်ဆိုတဲ့Bigdash အပြည့်အစုံကိုအောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ …
ဒီနှစ်2022ခုနှစ်အတွင်းမာ Adesanyaနဲ့ထိုးဖို့စတင်ပြင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းပြောလာတဲ့Reinier de Ridder အပြည့်အစုံကိုအောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ ဒီနှစ်2022ခုနှစ်အတွင်းမာ Adesanyaနဲ့ထိုးဖို့စတင်ပြင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းပြောလာတဲ့Reinier de Ridder အပြည့်အစုံကိုအောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ ဒီနှစ်2022ခုနှစ်အတွင်းမာ Adesanyaနဲ့ထိုးဖို့စတင်ပြင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းပြောလာတဲ့Reinier de Ridder အပြည့်အစုံကိုအောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ ဒီနှစ်2022ခုနှစ်အတွင်းမာ Adesanyaနဲ့ထိုးဖို့စတင်ပြင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းပြောလာတဲ့Reinier de Ridder အပြည့်အစုံကိုအောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ ဒီနှစ်2022ခုနှစ်အတွင်းမာ Adesanyaနဲ့ထိုးဖို့စတင်ပြင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းပြောလာတဲ့Reinier de Ridder အပြည့်အစုံကိုအောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ ဒီနှစ်2022ခုနှစ်အတွင်းမာ Adesanyaနဲ့ထိုးဖို့စတင်ပြင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းပြောလာတဲ့Reinier de Ridder အပြည့်အစုံကိုအောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ …
မတ်လ (၁၁) ရက်နေ့မှာ ပွဲရှိတဲ့ မာတင်ငုယင်… လာမယ့် မတ္လ (၁၁) ရက်နေ့ကြရင် အောင္လသူငယ္ခ်င်း မာတင်ငုယင်ရဲ့ပြဲရွိပါတယ်။ျေပာရရင် (၁၀) ရက်တောင္မလိုတော့ပါဘူး။ဒီပြဲက မာတင်ငုယင်အတြက် အရမ်းကို အေရးကြီးတဲ့ပြဲပါ။ ရွေ့မွာလည်း နွစ္ပြဲဆက် အလဲထိုးခံထားရတာကြောင့် ဒီပြဲမွာ နိုင္ပျြဲပန္လည်ရွာဖြေနိုင္ဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။ One ကလည်း သူ့ကို ခုမွ One နဲ့ စာခ်ုပ္ခ်ုပ္ဆိုထားတဲ့ လူငယ္ဖိုက္တာတစ်ယောက္နဲ့ …
မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် အောင်လအန်ဆိုင်း ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ပုံတူပန်းချီရေးဆွဲခဲ့တဲ့ ညီမငယ်လေး… မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အောင်လအန်ဆိုင်းကတော့နိုင်ငံတကာစင်မြင့်ထက်မှာမြန်မာအလံကိုခြုံပြီးချန်ပီယံခါးပတ်တွေလည်းရရှိခဲ့ဖူးတဲ့သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။… လက်ရှိမှာအောင်လအန်ဆန်ကချန်ပီယံခါးပတ်တွေကိုဆုံးရှုံးထားရပေမယ့်Traningတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်နေပြီးမြန်မာပရိသတ်တွေအတွက်ချန်ပီယံခါးပတ်တွေကိုအရယူပေးမယ်လို့ကြုံးဝါးထားတာဘဲဖြစ်ပါတယ်နော်။… ဒီနေ့မှာတော့အောင်လအန်ဆိုင်းကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ညီမငယ်လေးတစ်ဦးကသူတတ်ကျွမ်းတဲ့ပန်းချီပညာနဲ့အောင်လပုံတူကိုရေးဆွဲခဲ့တာဘဲဖြစ်ပါတယ်၊စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။… မွနျမာ့ဂုဏျဆောငျ အောငျလအနျဆိုငျး ကို ဂုဏျပွုတဲ့အနနေဲ့ပုံတူပနျးခြီရေးဆှဲခဲ့တဲ့ ညီမငယျလေး… မွနျမာ့ဂုဏျဆောငျတဈယောကျဖွဈတဲ့အောငျလအနျဆိုငျးကတော့နိုငျငံတကာစငျမွငျ့ထကျမှာမွနျမာအလံကိုခွုံပွီးခနျြပီယံခါးပတျတှလေညျးရရှိခဲ့ဖူးတဲ့သူတဈယောကျပဲဖွဈပါတယျနျော။ လကျရှိမှာအောငျလအနျဆနျကခနျြပီယံခါးပတျတှကေိုဆုံးရှုံးထားရပမေယျ့Traningတှပွေငျးပွငျးထနျထနျလုပျနပွေီးမွနျမာပရိသတျတှအေတှကျခနျြပီယံခါးပတျတှကေိုအရယူပေးမယျလို့ကွုံးဝါးထားတာဘဲဖွဈပါတယျနျော။ ဒီနမှေ့ာတော့အောငျလအနျဆိုငျးကိုဂုဏျပွုတဲ့အနနေဲ့ညီမငယျလေးတဈဦးကသူတတျကြှမျးတဲ့ပနျးခြီပညာနဲ့အောငျလပုံတူကိုရေးဆှဲခဲ့တာဘဲဖွဈပါတယျ၊စာဖတျပရိတျသတျကွီးမြားအတှကျပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။ မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် အောင်လအန်ဆိုင်း ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ပုံတူပန်းချီရေးဆွဲခဲ့တဲ့ ညီမငယ်လေး… မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အောင်လအန်ဆိုင်းကတော့နိုင်ငံတကာစင်မြင့်ထက်မှာမြန်မာအလံကိုခြုံပြီးချန်ပီယံခါးပတ်တွေလည်းရရှိခဲ့ဖူးတဲ့သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ လက်ရှိမှာအောင်လအန်ဆန်ကချန်ပီယံခါးပတ်တွေကိုဆုံးရှုံးထားရပေမယ့်Traningတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်နေပြီးမြန်မာပရိသတ်တွေအတွက်ချန်ပီယံခါးပတ်တွေကိုအရယူပေးမယ်လို့ကြုံးဝါးထားတာဘဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ ဒီနေ့မှာတော့အောင်လအန်ဆိုင်းကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ညီမငယ်လေးတစ်ဦးကသူတတ်ကျွမ်းတဲ့ပန်းချီပညာနဲ့အောင်လပုံတူကိုရေးဆွဲခဲ့တာဘဲဖြစ်ပါတယ်၊စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ မွနျမာ့ဂုဏျဆောငျ အောငျလအနျဆိုငျး ကို ဂုဏျပွုတဲ့အနနေဲ့ပုံတူပနျးခြီရေးဆှဲခဲ့တဲ့ ညီမငယျလေး… မွနျမာ့ဂုဏျဆောငျတဈယောကျဖွဈတဲ့အောငျလအနျဆိုငျးကတော့နိုငျငံတကာစငျမွငျ့ထကျမှာမွနျမာအလံကိုခွုံပွီးခနျြပီယံခါးပတျတှလေညျးရရှိခဲ့ဖူးတဲ့သူတဈယောကျပဲဖွဈပါတယျနျော။ …
Ground fight အားနည်းနေမှုကို ပြင်ဆင်ဖို့အတွက် လက်ရှိလေ့ကျင့်နေတဲ့ Gym နဲ့လမ်းခွဲလိုက်တဲ့ အောင်လအန်ဆန်း…
Ground fight အားနည်းနေမှုကို ပြင်ဆင်ဖို့အတွက် လက်ရှိလေ့ကျင့်နေတဲ့ Gym နဲ့လမ်းခွဲလိုက်တဲ့ အောင်လအန်ဆန်း… နောက်ဆုံးထိုးသတ်ခဲ့တဲ့(၄)ပွဲမှာ(၃)ပွဲထိအရေးနိမ့်ခဲ့ပြီး၊ အဲဒီ့(၃)ပွဲစလုံးမှာ အောင်လဟာ ပြိုင်ဘက်တွေကို ground fight တွေနဲ့ချည်းအရှုံးပေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။… ဒီအပေါ်မှာ အားမလိုအားမရဖြစ်နေကြတဲ့ မြန်မာပရိသတ်တွေကလည်း အောင်လကို gym ပြောင်းပြီးလေ့ကျင့်ဖို့ တိုက်တွန်းပြောကြားမှုတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။.. ဒါကြောင့် အောင်လတစ်ယောက် သူလက်ရှိ လက်တွဲနေတဲ့ MMA Gym တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Sanford …
ရိုင်နီရာ ကို `နှာခေါင်းရိုး ကျိုးအောင်ချိုး ပစ်မယ် ‘လို့ စိန်ခေါ်သွားတယ့် ဘစ်ဒက်ရှ်…
ရိုင်နီရာ ကို `နှာခေါင်းရိုး ကျိုးအောင်ချိုး ပစ်မယ် ‘လို့ စိန်ခေါ်သွားတယ့် ဘစ်ဒက်ရှ်… အောင်လနှင့်ပွဲအပြီး အင်တာဗျူးမှာ ဗစ်တလီ ဘစ်ဒက်ရ်ှက ယခုလိုဘဲ ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ ဘစ်ဒက်ရှ်၏ ပြောကြားချက်မှာ – ” ကျွန်တော် ဒီနေ့ပွဲမှာ အနိုင်ရရှိခဲ့လို့ ပျော်ပါတယ်။ အောင်လအန်ဆန်းဟာ ကျွန်တော်နဲ့ အရင်က နှစ်ကြိမ် တွေ့ဆုံထားခဲ့ဖူးသည့် ဖိုက်တာတစ်ဦးပါ။ အောင်လ ဟာ …
နည်းပြကြီးhenrihooftကိုနှုတ်ဆက်စကားဆိုလိုက်တဲ့အောင်လအန်ဆန်းနဲ့ချန်ပီယံစိန်ခေါ်ခွင့်ရတော့မဲ့makhachev အပြည့်အစုံကိုအောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ နည်းပြကြီးhenrihooftကိုနှုတ်ဆက်စကားဆိုလိုက်တဲ့အောင်လအန်ဆန်းနဲ့ချန်ပီယံစိန်ခေါ်ခွင့်ရတော့မဲ့makhachev အပြည့်အစုံကိုအောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ နည်းပြကြီးhenrihooftကိုနှုတ်ဆက်စကားဆိုလိုက်တဲ့အောင်လအန်ဆန်းနဲ့ချန်ပီယံစိန်ခေါ်ခွင့်ရတော့မဲ့makhachev အပြည့်အစုံကိုအောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ နည်းပြကြီးhenrihooftကိုနှုတ်ဆက်စကားဆိုလိုက်တဲ့အောင်လအန်ဆန်းနဲ့ချန်ပီယံစိန်ခေါ်ခွင့်ရတော့မဲ့makhachev အပြည့်အစုံကိုအောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ နည်းပြကြီးhenrihooftကိုနှုတ်ဆက်စကားဆိုလိုက်တဲ့အောင်လအန်ဆန်းနဲ့ချန်ပီယံစိန်ခေါ်ခွင့်ရတော့မဲ့makhachev အပြည့်အစုံကိုအောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ နည်းပြကြီးhenrihooftကိုနှုတ်ဆက်စကားဆိုလိုက်တဲ့အောင်လအန်ဆန်းနဲ့ချန်ပီယံစိန်ခေါ်ခွင့်ရတော့မဲ့makhachev အပြည့်အစုံကိုအောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ နည်းပြကြီးhenrihooftကိုနှုတ်ဆက်စကားဆိုလိုက်တဲ့အောင်လအန်ဆန်းနဲ့ချန်ပီယံစိန်ခေါ်ခွင့်ရတော့မဲ့makhachev အပြည့်အစုံကိုအောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ နည်းပြကြီးhenrihooftကိုနှုတ်ဆက်စကားဆိုလိုက်တဲ့အောင်လအန်ဆန်းနဲ့ချန်ပီယံစိန်ခေါ်ခွင့်ရတော့မဲ့makhachev အပြည့်အစုံကိုအောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ နည်းပြကြီးhenrihooftကိုနှုတ်ဆက်စကားဆိုလိုက်တဲ့အောင်လအန်ဆန်းနဲ့ချန်ပီယံစိန်ခေါ်ခွင့်ရတော့မဲ့makhachev အပြည့်အစုံကိုအောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ နည်းပြကြီးhenrihooftကိုနှုတ်ဆက်စကားဆိုလိုက်တဲ့အောင်လအန်ဆန်းနဲ့ချန်ပီယံစိန်ခေါ်ခွင့်ရတော့မဲ့makhachev အပြည့်အစုံကိုအောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ နည်းပြကြီးhenrihooftကိုနှုတ်ဆက်စကားဆိုလိုက်တဲ့အောင်လအန်ဆန်းနဲ့ချန်ပီယံစိန်ခေါ်ခွင့်ရတော့မဲ့makhachev အပြည့်အစုံကိုအောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ နည်းပြကြီးhenrihooftကိုနှုတ်ဆက်စကားဆိုလိုက်တဲ့အောင်လအန်ဆန်းနဲ့ချန်ပီယံစိန်ခေါ်ခွင့်ရတော့မဲ့makhachev အပြည့်အစုံကိုအောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ နည်းပြကြီးhenrihooftကိုနှုတ်ဆက်စကားဆိုလိုက်တဲ့အောင်လအန်ဆန်းနဲ့ချန်ပီယံစိန်ခေါ်ခွင့်ရတော့မဲ့makhachev အပြည့်အစုံကိုအောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ နည်းပြကြီးhenrihooftကိုနှုတ်ဆက်စကားဆိုလိုက်တဲ့အောင်လအန်ဆန်းနဲ့ချန်ပီယံစိန်ခေါ်ခွင့်ရတော့မဲ့makhachev အပြည့်အစုံကိုအောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ နည်းပြကြီးhenrihooftကိုနှုတ်ဆက်စကားဆိုလိုက်တဲ့အောင်လအန်ဆန်းနဲ့ချန်ပီယံစိန်ခေါ်ခွင့်ရတော့မဲ့makhachev အပြည့်အစုံကိုအောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ …
မလိခင်ရောဘူလာနဲ့ပါတညတည်းထိုးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့De Ridderနဲ့နှာခေါင်းရိုးချိုးပစ်မယ်ဆိုတဲ့Bigdash…. အပြည့်အစုံကိုအောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ မလိခင်ရောဘူလာနဲ့ပါတညတည်းထိုးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့De Ridderနဲ့နှာခေါင်းရိုးချိုးပစ်မယ်ဆိုတဲ့Bigdash…. အပြည့်အစုံကိုအောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ မလိခင်ရောဘူလာနဲ့ပါတညတည်းထိုးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့De Ridderနဲ့နှာခေါင်းရိုးချိုးပစ်မယ်ဆိုတဲ့Bigdash…. အပြည့်အစုံကိုအောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ မလိခင်ရောဘူလာနဲ့ပါတညတည်းထိုးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့De Ridderနဲ့နှာခေါင်းရိုးချိုးပစ်မယ်ဆိုတဲ့Bigdash…. အပြည့်အစုံကိုအောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ မလိခင်ရောဘူလာနဲ့ပါတညတည်းထိုးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့De Ridderနဲ့နှာခေါင်းရိုးချိုးပစ်မယ်ဆိုတဲ့Bigdash…. အပြည့်အစုံကိုအောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ မလိခင်ရောဘူလာနဲ့ပါတညတည်းထိုးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့De Ridderနဲ့နှာခေါင်းရိုးချိုးပစ်မယ်ဆိုတဲ့Bigdash…. အပြည့်အစုံကိုအောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ မလိခင်ရောဘူလာနဲ့ပါတညတည်းထိုးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့De Ridderနဲ့နှာခေါင်းရိုးချိုးပစ်မယ်ဆိုတဲ့Bigdash…. အပြည့်အစုံကိုအောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ မလိခင်ရောဘူလာနဲ့ပါတညတည်းထိုးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့De Ridderနဲ့နှာခေါင်းရိုးချိုးပစ်မယ်ဆိုတဲ့Bigdash…. အပြည့်အစုံကိုအောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ မလိခင်ရောဘူလာနဲ့ပါတညတည်းထိုးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့De Ridderနဲ့နှာခေါင်းရိုးချိုးပစ်မယ်ဆိုတဲ့Bigdash…. အပြည့်အစုံကိုအောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ မလိခင်ရောဘူလာနဲ့ပါတညတည်းထိုးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့De Ridderနဲ့နှာခေါင်းရိုးချိုးပစ်မယ်ဆိုတဲ့Bigdash…. အပြည့်အစုံကိုအောက်တွင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ …
Sanford MMAကထွက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အောင်လ… ဒီမနက်ပိုင်းမာတင်ပဲ အောင်လတယောက်အနေနဲ့ သူ့ရဲ့henri hooftကိုလေးနှစ်ကြာလေ့ကျင့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဘာညာဆိုပီးကျေးဇူးတင်သွားခဲ့ပါတယ်။ အောင်လတယောက်ဘယ်ကိုများပြောင်းတော့မလဲ ဒါမမဟုတ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအနားယူတော့မို့ဒီလိုပြောတာလားပရိတ်သတ်တွေရောဘယ်လိုထင်ကြပါသလဲခဗျာ။.. Sanford MMAကထွက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အောင်လ… ဒီမနက်ပိုင်းမာတင်ပဲ အောင်လတယောက်အနေနဲ့ သူ့ရဲ့henri hooftကိုလေးနှစ်ကြာလေ့ကျင့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဘာညာဆိုပီးကျေးဇူးတင်သွားခဲ့ပါတယ်။ အောင်လတယောက်ဘယ်ကိုများပြောင်းတော့မလဲ ဒါမမဟုတ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအနားယူတော့မို့ဒီလိုပြောတာလားပရိတ်သတ်တွေရောဘယ်လိုထင်ကြပါသလဲခဗျာ။.. Sanford MMAကထှကျတော့မယျဆိုတဲ့အကွောငျးပွောလိုကျပွီဖွဈတဲ့အောငျလ… ဒီမနကျပိုငျးမာတငျပဲ အောငျလတယောကျအနနေဲ့ သူ့ရဲ့henri hooftကိုလေးနှဈကွာလကေ့ငျြ့ပေးခဲ့တဲ့အတှကျကြေးဇူးပါဘာညာဆိုပီးကြေးဇူးတငျသှားခဲ့ပါတယျ။ အောငျလတယောကျဘယျကိုမြားပွောငျးတော့မလဲ ဒါမမဟုတျသူကိုယျတိုငျကလညျးအနားယူတော့မို့ဒီလိုပွောတာလားပရိတျသတျတှရေောဘယျလိုထငျကွပါသလဲခဗြာ။.. Sanford MMAကထွက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အောင်လ… ဒီမနက်ပိုင်းမာတင်ပဲ အောင်လတယောက်အနေနဲ့ သူ့ရဲ့henri hooftကိုလေးနှစ်ကြာလေ့ကျင့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဘာညာဆိုပီးကျေးဇူးတင်သွားခဲ့ပါတယ်။ …
Sanford MMAကထွက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အောင်လ… ဒီမနက်ပိုင်းမာတင်ပဲ အောင်လတယောက်အနေနဲ့ သူ့ရဲ့henri hooftကိုလေးနှစ်ကြာလေ့ကျင့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဘာညာဆိုပီးကျေးဇူးတင်သွားခဲ့ပါတယ်။ အောင်လတယောက်ဘယ်ကိုများပြောင်းတော့မလဲ ဒါမမဟုတ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအနားယူတော့မို့ဒီလိုပြောတာလားပရိတ်သတ်တွေရောဘယ်လိုထင်ကြပါသလဲခဗျာ။.. Sanford MMAကထှကျတော့မယျဆိုတဲ့အကွောငျးပွောလိုကျပွီဖွဈတဲ့အောငျလ… ဒီမနကျပိုငျးမာတငျပဲ အောငျလတယောကျအနနေဲ့ သူ့ရဲ့henri hooftကိုလေးနှဈကွာလကေ့ငျြ့ပေးခဲ့တဲ့အတှကျကြေးဇူးပါဘာညာဆိုပီးကြေးဇူးတငျသှားခဲ့ပါတယျ။ အောငျလတယောကျဘယျကိုမြားပွောငျးတော့မလဲ ဒါမမဟုတျသူကိုယျတိုငျကလညျးအနားယူတော့မို့ဒီလိုပွောတာလားပရိတျသတျတှရေောဘယျလိုထငျကွပါသလဲခဗြာ။.. Sanford MMAကထွက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အောင်လ… ဒီမနက်ပိုင်းမာတင်ပဲ အောင်လတယောက်အနေနဲ့ သူ့ရဲ့henri hooftကိုလေးနှစ်ကြာလေ့ကျင့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဘာညာဆိုပီးကျေးဇူးတင်သွားခဲ့ပါတယ်။ အောင်လတယောက်ဘယ်ကိုများပြောင်းတော့မလဲ ဒါမမဟုတ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအနားယူတော့မို့ဒီလိုပြောတာလားပရိတ်သတ်တွေရောဘယ်လိုထင်ကြပါသလဲခဗျာ။.. Sanford MMAကထွက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အောင်လ… ဒီမနက်ပိုင်းမာတင်ပဲ အောင်လတယောက်အနေနဲ့ သူ့ရဲ့henri hooftကိုလေးနှစ်ကြာလေ့ကျင့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဘာညာဆိုပီးကျေးဇူးတင်သွားခဲ့ပါတယ်။ …
မင်းသမီး Song Hye Kyo နဲ့ ကွာရှင်းခဲ့တာ ၃ နှစ်ကြာပြီးနောက်ပျော်ရွှင်လာတယ် မင်းသား Song Joong Ki
PDF တွေကို လုံးဝမထောက်ပန့်ဘူးလို့ ငြင်းလိုက်တဲ့ မြန်မာနာမည်ကြီး အနုပညာရှင်